BADWAYN QASHIN AH: Halkani waa Muqdishee maxaan wax looga qaban? | Hadalsame Media
Home Wararka BADWAYN QASHIN AH: Halkani waa Muqdishee maxaan wax looga qaban?
BADWAYN QASHIN AH: Halkani waa Muqdishee maxaan wax looga qaban?
(Hadalsame) 04 Okt 2019 – Inkastoo ay jiraan wadooyin la dayactiray hadana waxaa wali muuqanaya in marka la eego kaalinta ay muqdisho ka qaadato dhaqaalaha doowlada in ay aad u yartahay waxa magaalada dib loogu celiyo.
Wasaarada maaliyada waxa ay horay u sheegtay in canshuurta muqdisho ka timaada ay sanadkii gaareyso 169 malyuun oo doolarka mareykanka ah taas oo ka badan kala bar miisaaniyada Dowlada. Waxaa dheer lacago kale oo dibedaha ka yimaada oo lagu kabo miisaaniyadda DF. Haddaba maxaa wax lagaga qaban la’yahay adeegyada dayacan?
Sidoo kale waxaa jira dhaqaale si toos ah u gala gacanta doowlada hoose oo ah canshuurta doowlada hoose iyo qoondo uu gobalka Banaadir ka qaato dhaqaalaha dekadda ka soo xarooda.
Previous articleSanad kaddib qalitaankii Khashuuqji maxaan ka ognahay kiiskiisa?
Next articleDHEGEYSO: Sweden oo sheegtay inay u baahan doonto shaqaale badan oo AJNABI ah (Halkee ugu daran?)